Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseSeychelles » AmaSeychelles Manje Asekho ohlwini Olubomvu lwase-UK
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ukuphepha • Izindaba zaseSeychelles • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba
ISeychelles isusile kuhlu olubomvu lwase-UK
ISeychelles isiphume ohlwini olubomvu lwase-UK olumaketha isinyathelo esilandelayo sokubuyiselwa kwezokuvakasha lapho ziya khona.
IHhovisi Langaphandle, iCommonwealth & Development Office seliphakamise izeluleko zalo ngokumelene nakho konke kodwa okubalulekile ukuya ezindaweni ezingama-47 kufaka phakathi iSeychelles.
Abahambi bazokwazi ukuthola umshwalense walapho beya khona, futhi abagonyiwe abasadingeki ukuthi benze izivivinyo ze-PCR noma bahlukaniswe bodwa.
Lokhu kuzonikeza umfutho lapho uya khona kanye nezindiza zawo kanye nabalingani bayo bemboni yezokuvakasha.
Kusukela ngo-4 ekuseni kuya ku-GMT, ngoMsombuluko, ngo-Okthoba 11, 2021, abavakashi abavela e-UK, imakethe yomthombo omkhulu wezokuvakasha waseSeychelles, bangaphinde bavakashele indawo esiqhingini i-Indian Ocean nabahambi abakwaziyo ukuthola umshwalense walapho beya khona futhi abagonyiwe abasadingeki. ukuthatha izivivinyo ze-PCR noma ukuvalela wedwa ehhotela eligunyaziwe lapho bebuyela ekhaya.
Ihhovisi Langaphandle, iCommonwealth & Development Office (i-FCDO) seliphakamise izeluleko zalo kuzo zonke izindawo kodwa ezibalulekile zokuhambela izindawo ezingama-47 kufaka phakathi iSeychelles njengengxenye yohlelo olwenziwe lula ukuhamba kwamanye amazwe okubonile ukuthi esikhundleni selistimu yamarobhothi kufakwe uhlu olulodwa olubomvu, futhi kwehliswe nezidingo zokuhlolwa kwabahambi abagonywe ngokuphelele abagunyaziwe.
UNgqongqoshe Wezangaphandle Nezokuvakasha waseSeychelles uSylvestre Radegonde usamukele lesi sinyathelo esiza ngaphambi kwekhefu lesigamu kanye namaholide asebusika. “Ukususa uhlu olubomvu lwase-UK kungenye ingqopha-mlando ebalulekile ekutholeni kabusha imboni yezokuvakasha yaseSeychelles, futhi kuzonikeza umfutho lapho beya khona kanye nasezinkampanini zezindiza kanye nabalingani bayo embonini yezokuvakasha. Kuyasithokozisa ukwamukela izivakashi zethu zaseBrithani, imindeni kanye nabazobuya emuva eziqhingini zethu ezinhle. I-UK ibilokhu iyimakethe enamandla eSeychelles, ibeka indawo yesithathu ngo-2019 ngezivakashi ezingama-29,872, futhi sinethemba lokuthi ngalezi zindaba ezinhle, sizoqala ukuzibona futhi ngamanani amakhulu. Ngezinqubo zezempilo nezokuphepha ezamukelwe ngabezokuvakasha nezikhungo ezitholile isitifiketi esisemthethweni se-COVID-19, izivakashi zethu ziqinisekiswa ngeholidi eliphephile futhi elijabulisayo. ”
Izivakashi zaseSeychelles kufanele gcwalisa ifomu eligunyaza ukuhamba lapha futhi ubonise ubufakazi bokuhlolwa kwe-PCR okungekuhle emahoreni angama-72 ngaphambi kokuhambela lapho uya khona.
ISeychelles ingenye yezindawo zokuqala ukuvulela ngokugcwele izivakashi kungakhathalekile ukuthi zigonywe kanjani ngoMashi owedlule kulandela uhlelo oluqinile lokugoma olwagoma iningi labantu. Manje sekuqale ukuhlinzeka ngemithamo yokulekelela yomuthi wokugoma i-PfizerBioNTech kubantu abadala kanye nokugoma intsha. Inani lamacala e-COVID-19 lehle kakhulu emasontweni adlule kanti mancane kakhulu amacala avela kubavakashi.